Roobab xoogan oo ka da’ay dalka Joordan oo dad badan ku dhinteen – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaRoobab xoogan oo ka da’ay dalka Joordan oo dad badan ku dhinteen
10/11/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Daadad ka dhashay roobab xoogan oo ka da’ay dalka Jordan ayaa sababay dhimashada ilaa 9 ruux halka 3,700 dalxiisayaal ahna ay dowladda ku qasabtay in ay isaga tagaan Magaalada Petra ee dalkaasi si uu u yaraado khasaaraha ka dhalanaya daadadkaasi.
Dalxiisayaashaani ayaa loo waday meel amaan ah oo uusan roob ka da’in si naftooda loo badbaadiyo sida uu warbaahinta u sheegay afayeen u hadlay dowladda oo magaciisa lagu sheegay Jumana Ghunaimat.
Sidoo kale afayeenka ayaa ka warbixyay dadka sagaalka ah ee ku geeriyooday daadadkaasi in ay kamid ahaayeen Labba Dumar ah iyo Gabar yar oo wada joogay Gobolka Madaba ee dalkaasi Jordan halkaasi oo roobabka xoogan ay maalmahaanba ay ka da’ayeen.
“Gabadha yar iyo Labbada dumarka ah ee kamidka ah dadka ku dhintay masiibadaan ka dhalatay roobaablka, waxaa ay wada saarnaayeen hal gaari ka hor intaanu daadka qaadin gaariga ay wateyn waxaana dad goob joogeyaal ahaa ay inoo xaqiijiyeen in aynan jirin fursad lagu badbaadin karay oo uu mar qura daadku qaaday gaariga ay wateen durbaiina la wayaay oo ay mirqeyn”ayuu sheegay Jumana Ghunaimat mar uu warbaahinta ugu warbixnaayay dhacdadaani iyo dadka ku waxyeeloobay.
Ahmed Shamaseen oo kamid ah dadka deegaanka daadadka sida u xun u saameeyeen ahna milkiilaha Petra Harmony guest house ayaa Wakaalada wararka ee AP u sheegay in uu indhahiisa ku arkaayay daad wata dhagxaan in uu galay dukaaman dadka si aad ah kaga adeegtaan waxyeeleyayna dhamaan dadkii xiligaasi dukaameesanaayay oo qaarkood uu soo gaaray dhaawacyo daran.
Waxa uu sheegay in isagu uu badbaadiyay lamaane Neherland u dhashay oo degenaa Hotelkiisa kuwaasi oo dalxiis u yimid dalkaasi.
Dowladda Cumaan ayaa goobaha waxbarashada, shaqada iyo dalxiiskaba ku amartay in la xiro si bay yiraahdeen uu u yaraado khasaaraha waxayna u muuqataa in uu sii siyaadayo khaasaraha ka dhsahay daadadkaasi.
AKHRISO:- Maxaa looga hadlay Shirkii ka socday dalka Itoobiya